Kã Ma Jehovah Adasefo Mbɛsera Wo
Ana ebɛpɛ dɛ isũa pii fa Bible no anaa Jehovah Adasefo ho? Sɛ dɛm a, nna ɔno kã ma Jehovah Adasefo no mu kor mbɛsera wo. Hyehyɛ fɔɔm a ɔwɔ ase ha yi, na Jehovah Adasefo no mu kor a ɔwɔ w’apaamu hɔ no bɛba abɛsera wo.
Yɛdze woho nsɛm a ɔwoara dze bɛma hɛn no bɛyɛ edwuma yie mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum edzi w’ebisadze pɔtsee a ɔnye dɛ obi mbɛsera wo no ho dwuma. Yɛremmfa woho nsɛm no nndzi dwuma fofor biara bio. Iyi nye hɛn Ankorankor Ho Nsɛm A Wɔdze Dzi Dwuma Ho Nhyehyɛɛ no hyia.
Coronavirus (COVID-19) Ho Nkaabɔ: Wɔ mbea ahorow pii no, yennhyia mu wɔ bagua mu na Jehovah Adasefo no mu kor so remmba mmbɛsera wo. Yɛserɛ wo, sɛ erehyehyɛ fɔɔm yi a, fa wo tɛlefon nɔmba ka ho, na Jehovah Adasefo no mu kor a ɔwɔ w’apaamu hɔ no bɛfrɛ wo.